IOfisi ehlawulelweyo yezixhobo ezikhulu zeScreen | Iindaba zeGajethi
Iofisi ehlawulelweyo yezixhobo ezikhulu zesikrini
Sibona uphuculo oluncomekayo eOfisini esithe sonke sathanda ukubulela ngokuyinxenye ithuba lokusebenzisa iLizwi, i-Excel okanye iPowerPoint simahla kwi-smartphone yethu nge-Android, iOS okanye Windows 10 Inkqubo yokusebenza yeselfowuni, kodwa oku kungatshintsha ukuba ikhomputha esisebenzisa kuyo inescreen esikhulu.
Njengoko kuchaziwe kwisithethi sikaMicrosoft kungekudala Ukuba asibhalisanga kwiOfisi 365 asizokwazi ukwenza, ukuhlela okanye ukuprinta amaxwebhu kwimeko yokudlula kwiscreen se-intshi eyi-10,1. Icacisa kananjalo ukuba isicelo siza kuqhubeka simahla kwi-iOS, i-Android kunye Windows 10 Iselfowuni, ukuba nje ezo zikrini aziboniswanga.
Izinketho zepremiyamu zeOfisi kaMicrosoft ziya kuba neendleko kwezi zixhobo zinescreen esikhudlwana, njengakwiiChannelbook ezininzi, kuba, ngokutsho kwenkampani, zivumela umsebenzisi ukuba enze imisebenzi enamandla ngakumbi neyinkimbinkimbi kunezixhobo ezinobungakanani bescreen esincinci. Esi kubonakala sesona sizathu sentlawulo Abafana abavela eRedmond bafuna ukugqithisa abasebenzisi beOfisi.
Abo bajongene nokupapasha ezi ndaba kwi 9to5Google Basicacisela ukuba izixhobo ezinesikrini esingaphezulu kwe-10.1 intshi ziya kuba nesicelo esikhethekileyo sokusebenzisa iOfisi. Oku kuya kuba kukutshintsha kwintlawulo okanye hayi iOfisi, Umkhwa obonakala ubuthathaka kuthi kodwa iMicrosoft iqinisekile ukuba icacile malunga nenyathelo. Ngaphakathi kokulinganiselwa kobungakanani, ukuba ihlala ikwi-intshi ye-10,1, ezinye ii-Chromebook zingena nazo, ezibonakala ngathi zingaqali kuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iofisi ehlawulelweyo yezixhobo ezikhulu zesikrini
Kuba ndine-iPad Pro 12,9 ″ ukuba iOfisi ihlawulwe, malunga neenyanga ezili-10 ezidlulileyo ... Ihlazo!
I-LG iya kuphehlelela i-OLED TV ye-1mm kuphela ngonyaka we-2017
I-UMi Plus E nayo yongeza kwi-6GB ye-RAM